Xildhibaan Odowaa oo taageerayaashiisa kula hadlay caasimada Galmudug – Kalfadhi
Xildhibaan Odowaa oo taageerayaashiisa kula hadlay caasimada Galmudug
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo ah musharax maadxweyne oo u taagan hoggaanka maamul gobaleedka Galmudug ayaa gaaray maanta magaalada Dhuusamareeb waxaana socdaalkan ku wehlinayey qaar kamida mudenayaasha baarlamanka ee laga soo doortay deegaannada Galmudug.
Musharax xildhibaan Odawaa ayaa munaasabad uu ku qabtay magaalada dhuusamareeb ka sheegay in uu si rasmi ah ugu dhawaaqayo musharaxnimadiisa Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug isaga oo balan qaaday in uu ka qeyb qaadan doono sidii lagu heli lahaa Galmudug mideysan.
“Galmudugta aan madaxweynaha ka noqonayo ma noqon doonta mid ka hortimaadda dowladda oo laga mucaarado ee waxa ay noqon doontaa Galmudug dowladda laga taageero, balse haddii ay dowladdu la timaado wax qaldan waan ku diidi doonaa, ”Ayuu yiri Xidhibaan Odawaa.
Xildhibaan Odowaa ayaa soo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Fathi Maxamed Axmed,Kalfadhi
Prof Dufle oo sheegay in markii dalka uu bur-buray daladaha waxbarashada ay qaateen kaalin muhiim ah
Xildhibaan Zakariye “Kenya arrintan Badda ma deyneyso, annaguna is-dhiibi-meyno”